Hormuud News Wednesday, May 23rd, 2018 | 01:33
[Sunday, December 3rd, 17] :: Madaxweynaha Jabuuti oo la kulmay madaxda Galmudug iyo Ahlu Sunna
Jabuuti (RH) Madaxweynaha waddanka Jabuuti, Ismaacil Cumar Geelle ayaa maanta oo Axad ah qasriga madaxtooyada Jabuuti ku qaabilay wafdi ka kala socda maamullada Galmudug iyo Ahlu Sunna kuwaasoo maalmahan ku shirnaa dalkaas isla markaanna maanta kala saxiixday heshiis aan la shaacin qoddobada ku qoran.
Madaxweynaha ayaa kala hadlay labada dhinac heshiiska ay gaareen iyo sida ay ugu qanacsan yihiin, waxa uu soo dhaweeyay in Galmudug iyo Ahlu Sunna oo muddo khilaaf uu ka dhex aloosnaa ay go’aan ku gaareen in ay heshiis gaaraan si loo afjaro khilaafka ragaadiyey.
Madaxweyne Geelle ayaa ballan qaaday in dowladiisa ay sii wadi doonto taageerada Galmudug si maamulkaas u noqdo maamul horumar gaara.
Dhinaca kale, wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating‏ ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen labada dhinac isagoo umahadceliyey IGAD oo dhexdhexaadinta garwadeen ka ahayd.
Guddoomiyaha Ahlu Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Xasan Cali oo u saxiixay dhinaca Ahlu Sunna heshiiska ayaa sheegay in qodobada dhiman ay kala saxiixan doonaan marka ay dib dalka ugu laabtaan balse ay ku faraxsan yihiin heshiiska ay gaareen labada dhinac.
“Halkan waxaa ku gaaray heshiis hordhac ah oo aan isku afgaranay wax yaabaha noo dhiman dalkii ayaan ku dhammeestiraneynaa”ayuu yiri Shiikh Maxamed Shaakir.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa isna sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska ay la gaareen Ahlu Sunna waana markii ugu horreysay dhowr iyo toban sanno kaddib ayuu yiri.
Waxa uu mahadceliyey shacabka iyo madaxweynaha Jabuuti maadama ay marwalba gacan siinayeen Soomaalida.
Heshiiska labada dhinac ee aan la sheegin qoddobada uu ku kaaban yahay ayaa waxaa saxiixiisa goobjoog ka ahaa wasiirka Beeraha iyo Biyaha ee Jabuuti, Maxamed Axmed Cawaale, danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan iyo mas’uliyiin ka socda dowladda fedaraalka Soomaaliya.